Mpanamboatra sy mpamatsy Diviziona Automotive China | KAIHUA
Vahaolana sy famolavolana lasitra ho an'ny rafitra ivelany fiara toy ny bumper, grille, mpiambina fotaka sns; rafitra anatiny toy ny tontonana fitaovana, tontonana varavarana, andry sns; Rafitra fampangatsiahana toy ny shround, fan, tank tank sns.
Ny orinasa dia manohana ireo fiara OEM malaza malaza eran-tany toa an'i McLaren sy fiara fanatanjahan-tena hafa ary Tesla, ary koa ny alemanina, frantsay, japoney ary amerikanina. Avy any Shina ihany koa izy io ho an'ny SAIC, Geely, Great Wall, Guangzhou Automobile, BYD, sns. Ny marika fiara iraisam-pirenena sinoa dia marika iarahan'ny FAW-Volkswagen, Beijing Benz, Shanghai GM, Dongfeng Nissan, Dongfeng Renault ary Shenlong Automobile, ary mpamatsy ambaratonga voalohany toa an'i Faurecia, Pio, Yanfeng, Echi, Magna sns. Mifanaraka.
● OEM manerantany:
● Mpamatsy kilasy voalohany:
Tombony: mampihena ny vidin'ny bobongolo sy ny vidin'ny famokarana.
Ny mpiasa Kaihua dia mifikitra amin'ny filozofia "miompana amin'ny vahoaka, mandresy amin'ny kalitao, fanavaozana mitohy, fitantanana maharitra" filozofia, mifehy fatratra ny "kalitao, ny fotoana ary ny vidiny", izy rehetra dia mandray ny mpanjifa ho foibe. Kaihua dia manolo-tena ho mpamatsy bobongolo faran'izay tsara manerantany.
Ny tobin'i Huangyan dia mahatratra 40000 metatra toradroa ny velarany, misy mpiasa maherin'ny 500 ary manamboatra manodidina ny 1.500 mould isan-taona. Izy io dia misy fizarana Logistics, fizarana otomotif, fizarana ao an-tokantrano, fizarana fitaovana sy fitsaboana, manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fitoeram-bovoka, pallet, latabatra sy seza ivelany, vata, boaty fitehirizana, fividianana rivotra, vata fampangatsiahana ary lasitra hafa. 80% ny bobongolo no amidy any ivelany, ao anatin'izany ny GARDENLIFE, GRACIOUSLIVING, RIMAX, SMARTFLOW, MAOROPLASTICS, STARPLAST, sns. Ho an'ny GM, Great Wall Automobile, SAIC, NAC, Geely Automobile, Tianjin FAW, Haima Automobile ary hafa marika mahaleo tena. 60% ny bobongolo dia aondrana any amin'ny firenena 60 na faritra toa an'i Eropa, Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Azia, sns.
Ny tobin'ny Sanmen dia mandrakotra velarantany 36000 metatra toradroa misy mpiasa maherin'ny 350, ary mamokatra lasitra maherin'ny 600 isan-taona. Izy io dia miavaka amin'ny lasitra fanindronana plastika ho an'ny faritra amin'ny fiara toy ny môtô fiara, fefy, jiro ary faritra hafa amin'ny rafitra ivelany; dashboard fiara, tontonana varavarana sy faritra hafa rafitra haingon-trano anatiny; rafi-drivotra, lelan-drivotra, flume ary faritra hafa amin'ny rafitra mangatsiaka. Izy io dia manome lasitra sy serivisy ho an'ireo marika fiara malaza toy ny GM, FORD, VW, BMW, BENZ, Peugeot, RENAULT, Magna, FIAT, VOLVO, NISSAN, TOYOTA, ary ireo orinasam-piara malaza toa ny IAC, PO, Faurecia, Viston, BOSCH, BEHR, Valeo ary Denso. 70% ny bobongolo dia aondrana any amin'ny firenena na faritra mihoatra ny 30 toa an'i Eropa, Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Azia sns.
Teo aloha: Fizarana ankohonana
Manaraka: Diviziona lozisialy